Ny mpandraharaha India dia mitrandraka amin'ny rano hanohanana ny fanomezana fizahan-tany
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » India Travel News » Ny mpandraharaha India dia mitrandraka amin'ny rano hanohanana ny fanomezana fizahan-tany
Febroary 8, 2018
India dia manana morontsiraka midadasika fa efa nanomboka vao manomboka amin'ny fampiasana azy amin'ny fialamboly na amin'ny tanjona ara-barotra.
Ankehitriny, ny governemanta dia nanomboka fandaharana feno faniriana hahita fa ny rano dia ampiasaina tsy ho an'ny fitetezana ihany, fa ho an'ny fizahan-tany sy fialamboly koa. Izany dia atao amin'ny alàlan'ny fiaraha-miombon'antoka sy fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina.
Raha nahita an'io fotoana io, nisy mpitia rano sy morontsiraka, Shripriya Dalmia Thirani, nilatsaka, toa izany, ary manolotra sambo roa, izay eo akaikin'ny morontsirak'i Mumbai, hanomezana fialamboly, toeram-pivoriana ary nahandro ho an'ny Vahiny 400 isaky ny sambo.
Shripriya Dalmia Thirani dia vehivavy efa za-draharaha maro ary niditra tamin'ny hetsika mahavokatra isan-karazany tao anatin'ny 37 taona. Anisan'izany ny kanto, ny fanaovana sarimihetsika ary ny famokarana, fa ny fitiavany voalohany dia ny rano foana, ary teo no misy azy ankehitriny rehefa nahita moron-dranomasina sy toeran-kaleha marobe nandritra ny diany sy ny dia fialantsasatra nataony.
Ny zavatra ataony izao dia hahafaly ny mpitsidika sy mpandeha maro, tsy ny kely indrindra amin'izy ireo, ny tenany.
Shripriya, avy amin'ny fianakavian'ny indostrian'ny indostrialy fanta-daza, dia manomboka manokatra ny moron-dranomasin'i Mumbai, miaraka amina sambo roa 400 seza, avy any Torkia ary manidina ny tricolor India ankehitriny. Faly izy momba izay hatolotry ny sambo, rehefa vonona amin'ny faran'ity taona ity izy.
Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ity mpanao gazety ity dia nanambara izy fa ny vahiny eny an-tsambo dia afaka manao hetsika maro sy safidy amin'ny hetsika literatiora, adihevitra, ary na dia kilalao aza dia hatolotra eny amin'ny sambo. Na ny mpizahatany na ny eo an-toerana dia samy afaka handany fotoana ilaina sy milamina, satria mankafy ny sakafo isan-karazany ihany koa. Ho vonona ho an'ny vondrona, fivoriana ary fihaonambe ireo sambo ireo - toerana iray tsy manam-paharoa MICE.
Amin'izao fotoana izao, ny fijanonana mandritra ny alina sy ny kasino dia tsy ao anaty karatra. Saingy zavatra iray azo antoka - ny sambo dia hanampy refy vaovao amin'ny fitsangantsanganana an-tsambo, fialamboly, fisakafoanana tsara ary ny sehatry ny fivoriana.